Annaga nagu saabsan - Hebei Yime New Material Technology Co., Ltd.
Hebei Yime New Material Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2010, inta badan ku hawlan alaabta ceeriin la isku qurxiyo, soosaaray dhirta, kabka nafaqo alaabta ceeriin iyo daawooyinka ceeriin.
xoogga Yime ee raadinta macaamiisha tayada la isku halayn karo ee alaabooyinka iyo adeegyada cusub ee horumarinta degdegga ah ee alaabta cusub, tayada badeecada iyo tiknoolajiyada sare ee joogtada ah iyo xasilloonida taageerada farsamada si loo guuleysto aqoonsiga macaamiisha caalamiga ah, alaabta shirkadda ayaa loo dhoofiyaa Maraykanka, Yurub, Aasiya, Australia, Afrika iyo dalal kale.
Shirkaddu iyada oo ah shirkad bixisa agabka ceeriin ee la isku qurxiyo oo tayo sare leh, shirkaddu waxa ay had iyo jeer ku adkaysanaysaa in ay kalsoonida macaamiisha si tayo leh u kasbato, kuna guulaysato soo dhawaynta suuqa oo hal-abuur leh, una heellan tahay caafimaadka iyo quruxda bini’aadamka.
Shirkaddu waxay horumarisay R&D, tignoolajiyada wax soo saarka iyo qalabka, waxayna dejisay nidaam tayo leh oo dhammaystiran si ay macaamiisha u siiso alaab badbaado leh, waxtar leh oo la aamini karo.
Shirkaddu waxay leedahay koox farsamo oo xoog leh, oo diiradda saareysa R&D iyo hal-abuurnimada tignoolajiyada, iyo iyada oo ku saleysan qoto-dheeraynta alaabada dhaqameed, cusboonaysiinta kuwii hore iyo soo saarista kuwa cusub.
Shirkaddu waxay ogaatay fikradda wadista horumarinta alaabta iyadoo la adeegsanayo hal-abuurnimo tignoolajiyadeed, waxay sii waday inay hubiso tayada badeecada, waxayna kor u qaaday horumarka saxda ah ee taxanaha alaabta.
Waxaan aaminsanahay in maaddooyinka firfircoon ee dabiiciga ahi ay yihiin aasaaska adeeggayaga macaamiisha.Tignoolajiyada wax soo saarka ee sayniska iyo waxtarka leh ayaa saldhig u ah in aan macaamiisha siino alaab gaar ah.Waxaan awood u leenahay inaan u adeegno dawooyinka, cuntada caafimaadka iyo warshadaha qurxinta.Macaamiisha, sii xalal badeecado cusub oo ku dar qiime cusub badeecadaha macaamiisha.
Waqtigan xaadirka ah, cilmi baarista iyo horumarinta iyo diiwaangelinta daroogada ee noocyo kala duwan ayaa socda, horumarkuna wuxuu si tartiib tartiib ah u kobcayaa jihada xoogga la'aanta ah ee daawooyinka la dhammeeyey iyo alaabta ceeriin.
Yime wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo lammaanahaaga ugu habboon.Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno.
Tayo wanaagsan, adeeg wanaagsan, mustaqbal wanaagsan!
Maaddooyinka ceeriin ee wanaagsan waxay sameeyaan tayo wanaagsan.
Bixi agab dabiici ah oo tayo sare leh oo loogu talagalay cuntada & cabitaanka, nafaqeynta iyo warshadaha dawooyinka